musha nyika dzakabatana Akasanganiswa Maartist Derrick Lewis Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Derrick Lewis Biography inokuudza chokwadi nezve nyaya yake yehucheche, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Vanin'ina uye Nhoroondo yekufambidzana. Kunyanya zvakadaro, ivo American Sportsperson's Vana vehama, Hupenyu hwePamoyo, mambure akakosha, Mubhadharo uye Lifestyle.
Muchidimbu, tinokuunzira mufananidzo wakazara weNhoroondo yeHupenyu yaDerrick Lewis, nyanzvi yekuAmerica yakasanganiswa yehondo.
Yedu Biography inotanga kubva pamazuva ake ekuzvarwa kusvika azove zita repamba mumakwikwi eMMA.
Ehe, tinomuzivisa se 'classic heavyweight yakasanganiswa martial artist, nekuda kwesimba rake rekugogodza uye chimiro.
Zvisinei nekurumbidzwa kwake, isu takaona kuti vateveri vashoma chete ndivo vakaverenga chidimbu cheDerrick Lewis's Biography.
Naizvozvo, isu takaona zvakakodzera kuti tikushandirei nyaya inonakidza yaDerrick Lewis uye nekuputsika kweakaitika mukurwira kusvika parizvino. Zvino, pasina kumwe kunonoka, ngatitangei.
Derrick Lewis nyaya yehucheche:
Kune ekutanga maBiography, anotakura zita remadunhurirwa rekuti - Iyo Dema Chikara. Derrick James Lewis akazvarwa munyika ino pazuva rechinomwe raKukadzi 7 kuvabereki vake muNew Orleans, Louisiana, US
Nhoroondo yedu yekuAmerica yakazvarwa semumwe wevanomwe vanin'ina. Derrick Lewis ndiye wechipiri mukuru pakati pehama dzake nhanhatu. Kunyange zvakadaro, iye pamwe nevanin'ina vake vakarerwa vega naamai vavo.
Mwana wechidiki akarerwa asina baba. Pamwe nekuda kwekushaya baba, Derrick Lewis akanetseka achirerwa naAmai vake.
Maitiro ake aive kure nekusakwana. Saka, aiwanzobatanidzwa mukurwisana mumugwagwa.
Mhirizhonga yaakaona kumba uye kutadza kwake kuita chero chinhu nezvazvo inofanira kunge yakazadza wechidiki Derrick Lewis nehasha. Amai vake uye nemhuri yese vakatsungirira kushungurudzwa kubva kuna baba vavo vanofungidzirwa.
Zvisinei, kuti atize kubva mukushungurudzwa, Amai vake nemhuri yake vakasiya New Orleans kune shizha rine shizha kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweHouston muTexas. Panguva iyoyo, Derrick akazove munhu ane runyararo akabva atora tsiva.
Pamakore gumi nemanomwe, Lewis akatanga kudzidzira tsiva uye aigadzirira kukakavara kwake kwekutanga. Nehurombo kwaari, jimu yakavharwa zvisingatarisirwi nekuda kwezvikonzero zvisingazivikanwi.
Asi pamusoro pazvo, tsika yake isingaite inotambudza yakanga yakaoma kumisa. Chibhakera chake chaigara chagadzirira kurwa.
Derrick paakanga ava nemakore 19, akakwezva pfungwa dzemapurisa. Akapomerwa kurwisa kwakaipisisa.
Mukomana uyu akarova aimbove murume wemukadzi waaidanana naye panguva iyoyo. Zvakadaro, akaiswa pachiyedzo nekuda kwezera rake uye kusavapo kwenyaya dzemutemo dzakapfuura.
Kunyangwe zvakadaro, haina kudzidzisa Derrick Lewis chero chidzidzo. Kune rimwe divi, iye aivewo wemitambo uye akagwinya semwana. Aiita mimwe mitambo, achigona mune yega yega. Bhora raiita kunge mutambo wakanaka.
Asi zvakare, akapinda mudambudziko, nekutyora mitemo yekuedzwa.
Derrick akatongerwa makore mashanu mujeri reCentral Unit muSugar Land asi akakurumidza kusunungurwa mumakore matatu nehafu.
Haana kumbopa bhora mukana. Panzvimbo pezvo, akawira murudo nokutora rutivi mumivhenganiswa yekarate.
Derrick Lewis Nhoroondo Yemhuri:
Tinogona kungofungidzira kuti upenyu hwaamai vasina murume vane vana vanomwe hwaizoratidzika sei. Amai vaDerrick Lewis vaishanda munzvimbo inogadzirwa ngarava.
Aiedza kuwana chouviri uye kutarisira vana vake zvakanaka. Vaive imba yevarombo vasina chavaikwanisa kurarama nacho.
Derrick Lewis Mhuri Yakatangira:
Kuenda kumadzitateguru ake, Derrick Lewis aramba kuzvibatanidza nababa vake vaaiti.
Saka nekudaro, tinobatanidza midzi yake kuna Amai vake, avo vakamurera chete. Kunyangwe zvaamai vake zvakadzama, akangwara MMA mutambi akaberekerwa muNew Orleans.
Guta iri parutivi rweRwizi rweMississippi, munzvimbo yekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwenyika yeUS yeLouisana. Pakutanga, "La Nouvelle-Orléans" muchiFrench, Guta rakatsanangurwa se "rakasarudzika" muUnited States, nekuda kwenhaka yaro yetsika nemitauro yakawanda.
New Orleans inozivikanwa zvakare nekuvakwa kwayo kweFrench neSpanish Creole. Zvakangofanana, zvinogoneka kuti Derrick Lewis ane midzi yake kuFrance.
Zvisineyi chokwadi, nekureva kweruzivo rwuri pamusoro, iye muAfro-American uye anobva kuNew Orleans. Ona tsanangudzo yemhuri yake midzi mumufananidzo uri pasi apa.
Mifananidzo yekuratidzira yemhuri yaDerrick Lewis.
Derrick Lewis Kutanga Basa:
Zvisinei nekutsamwa kwaDerrick, murairidzi wake wetsiva George Foreman haana kurasikirwa nekutenda kwake uye akaita mutambi wacho mutambi wenhabvu wepasi rese. Zvakadaro, murume akarega tsiva: akasarudza yakavhenganiswa karati.
Shamwari yaLewis yakamuudza nezveMMA. Wakave mukana wakanaka kwazvo kuna Derrick kuburitsa hunhu hwake uye kupedza nyota yake yekurwa mumugwagwa. Kunze kwezvo, yaive nzira inokurumidza yekuwana raramo yemhuri yake.
Derrick akatanga rwendo rwake muMMA muna 2009, paakaita dhipatimendi rake semutambi achipesana naJay Ross muna 2009.
Akarasikirwa nemakwikwi kuburikidza neTKO. Derrick akabva atarisana naTim Buchanan pachiitiko cheUnited States American Combat Association muna 2010. Panguva ino, akabuda akakunda kuburikidza neTechnical Knockout.
Mushure mekushandura hunyanzvi muna2010, Derrick aigona kunyora rekodhi yewrestling ya4-1 asati asaina neBellator Fighting Championship muna Chivabvu 2010.
Lewis akarongerwa kuita rake rekusimudzira kuBellator 45 muna 2011, achipesana neBrazilian Thiago Santos.
Zvisinei, mutambo wacho unodzimwa apo Santos yaifanira kubuda nekuda kwekukuvara. Derrick akabva anyora 6-0 neimwe isina-makwikwi mushure mekusiya Bellator, akakunda zvikuru nekubudirira kudzivirira Legacy FC Heavyweight Championship. Munguva pfupi yakwana, akabva asainira iyo UFC.
Chikara chakabudirira kudzivirira Legacy FC Heavyweight Championship mune rake rekutanga basa.
Derrick Lewis Dzidzo:
Mushure mokunge Dеrrісk Lеwіѕ apedza kudzidza paCypress Springs High School. Akabva aenda ku ѕtudу at Кіlgоrе Соllеgе.
Mutambi wetsiva wekuAmerica akange asingafarire zvedzidzo uye aigaro tariswa nezvemitambo. Sezvineiwo, Lewis akanakidzwa nechikoro chekoreji semutambi wenhabvu anovimbisa.
Mufananidzo unoratidza Cypress high Chikoro uye vadzidzi vayo.
Paaienda kuKilgore College, Lewis akatyora mutemo wake uye akatongerwa makore mashanu mujeri.
Pashure pejeri, Lewis haana kukwanisa kudzokera kukoreji. Nenguva isipi, akatanga kushanda somutyairi werori ndokudzokera kutsiva.
Derrick Lewis Biography - Mugwagwa weMukurumbira:
Mutambi wemuuto weAmerica akakwikwidza kukwidziridzwa kweBellator, Nhaka, uye UFC. Muna 2014, akasaina neUFC mushure mekuita makore maviri streak semhare yeLegacy heavyweight.
Gore rimwe chetero, akaita madhiragi ake ndokukunda kuburikidza neTKO munharaunda yekutanga. Zvakare, mumutambo wake wechipiri wekusimudzira, Derrick akatarisana naGuto Inocente kuUltimate Fighter 19 Mafainari pazuva rechitanhatu raChikunguru 6.
Akakunda mutambo uyu kuburikidza neKO mumutambo wekutanga. Mushure mezvo, akatora chikamu mumitambo yakati wandei uye akakunda mumizhinji yacho. Lewis akatarisana naMatt Mitrione, Ruan Potts, naShawn Jordan.
Viktor Pešta akatsiva muvengi wake naAnthony Hamilton nekuti Hamilton akamanikidzwa kubuda mubout.
Derrick akarwisanawo naGabriel Gonzaga muna 2016. Mutambo wacho wakamupa basa rake rekutanga reBonus Bonus.
Mutambo unopesana Gabriel Gonzaga muna 2016 zvakamupa iye kuita kwake kwekutanga kwebhonasi yehusiku.
Derrick Lewis Biography- Kumuka Mukurumbira:
Muna 2017, Lewis nemupikisi wake, Travis Browne, vakawana mubairo weKurwira Husiku nekuita kwavo.
Mushure mezvose, akakunda pamakwikwi kuburikidza nekugogodza mumutambo wechipiri. Zvakawanda gare gare mugore rimwe chetero, akawana kurwa kwake kwechipiri kwakateedzana kweNight bonus mubairo, kunyangwe nekurasikirwa.
Mushure mekurasikirwa, Lewis akazivisa kuti angave achienda pamudyandigere. Mukupesana, Lewis akaburitsa mumwedzi unotevera kuti iye pakupedzisira aizoenderera achirwa.
Akazotarisana naFabrício Werdum, Marcin Tybura, Francis Ngannou, Alexander Volkov, naDaniel Cormier veUFC Heavyweight Championship.
Kunyangwe akarasikirwa naCormier, kukakavara kwakaratidza chibhakera chake mukuzviisa mumakwikwi ehunyanzvi eMMA.
Kuita kwakasarudzika kurwisa mutambi weRussia Alexander Volkov kwakave nzvimbo yekubudirira mune rake basa: Derrick aive nemukana wekuve murwi weheavyweight. Nezvese izvo, akakundikana mazviri.
Kuita kwakasarudzika kurwisa mutambi weRussia Alexander Volkov yakave nzvimbo yekubudirira mune rake basa.
Mushure mekupokana kunoshamisa, Derrick akasaina kondirakiti itsva neUFC muna 2019. Zvichifambira mberi, akatarisana naAleksei Oleinik muna Nyamavhuvhu 2020.
Derrick akahwina mutambo uyu kuburikidza neTKO, achiisa rekodhi yekugogodza kwakawanda neheavyweight munhoroondo yeUFC.
Takatarisira kuti Lewis achasangana nekukunda Ciryl Gane pazuva rechinomwe Nyamavhuvhu 7 kuUFC 2021 yeiyo yepakati UFC Heavyweight Championship. Nehurombo, akarasikirwa wepakati UFC Championship neTKO mune yechitatu kutenderera.
Parizvino, ane рlауеd 33 mаtсhеѕ kwaakakunda makumi maviri ne Кnосkоut, imwe na Ѕubmіѕѕіоn, uye ina na Dесіѕіоn, asi akarasikirwa ina na Кnосkоut, imwe na Ѕubmіѕѕіоn, uye maviri ne Dесі. Chikamu chiri pasi apa chinoratidza akati wandei ekupedzisa kwaDerrick Lewis.
Derrick Lewis Dating ndiani?:
Kunyangwe yakabatikana basa chirongwa cheAmerican nyanzvi MMA, Zvichakufadza iwe kuziva kuti haasi muhukama chete.
Derrick Lewis akaroora musikana wake wenguva refu, April Davis. Pazasi pane mufananidzo wevaviri vakanaka.
Pix yaDerrick Lewis nemukadzi wake, April Davis.
Mutambi weAmerican UFC Derrick Lewis akasangana nemukadzi wake, April Davis, kuburikidza nehama yake. Vakatanga kutaura vachishandisa nhare Derrick asati ashanyira Kubvumbi mumba make, uye vamwe vese, vanodaro, inhoroondo.
Saka, vaviri vacho vakaroora kuHonolulu, Hawaii, pazuva re17th raJune 2017. Vaviri vacho pamwechete vane vana vatatu; vanakomana vaviri nemwanasikana mumwe. Zvekare, hatina ruzivo nezvevana vavo vatatu.
Vakomana vaviri vaDerrick Lewis.
Pamusoro pezvose, mushumo unoratidza kuti April Davis akashatirwa pamusoro pezvaifungidzirwa naDerrick kuti arovere mutsimba wechikadzi weUFC, Ronda Rousey.
Akaramba hukama hwepedyo pamusoro pechiitiko ichi, uko Lewis akaramba Kubvuma. Nekudaro, Derrick zvine mutsindo akaita chikanganiso chinotyisa chekutaura pachena kuti ari kupisa Rousey.
Gore rimwe chetero, runyerekupe rwaive narwo rwekuti Derrick akatanga kufarira waaishanda naye weMMA, aimbove mukwikwidzi we featherweight, muchimiro chemuchato wake.
Zvisinei, iyo Champ yairatidzika kunge yakaita chero chinhu chisina kukodzera: iye akangotumira maruva eRousey paakabatana neUFC Hall yeMukurumbira.
Chingangove chiri chikamu chePR mushandirapamwe wekusimudzira kufarira kwevanhu muhondo pakati paLewis nemurume waRonda, Travis Browne. Nekudaro, izvo zvinorehwa naLewis zvinogona kuve nekutsamwisa anopikisa.
Mufananidzo weRonda Rousey.
Derrick Lewis Hupenyu Hwemhuri:
Izvo hazvigoneke kudzikisira kuyedza kwakaitirwa Derrick Lewis kuti akazviita. Rukudzo rwakakodzera runofanira kuenda kuna amai vake uye dzimwe nhengo dzemhuri yake. Panguva ino, ngatitarisei zvakanakisa chimwe nechimwe chazvo.
NezveDerrick Lewis Baba:
Sezvambotaurwa, baba veUFC Champions baba vanga vasipo muhupenyu hwese hwaDerrick. Iko chete kubatana kwatinogona kuona kungori kubata kwaLewis nguva pfupi asati azvarwa.
Mishumo yaive nayo kuti akashungurudza mukadzi wake nevana. Mafungiro aya anofanira kunge akawedzera hasha dzaDerrick, zvichisiya chibhakera chemutsimba chakagadzirira kurwa chero nguva.
Hatina zvimwe zvakawanda nezvake. Kunyange zvakadaro, vana vake vanonzi havana chokuita naye.
NezveDerrick Lewis Amai:
Chirevo ichi chinoti, simba remukadzi hariwanikwe nekukanganiswa kwaakaitwa nehupenyu hwake paari. Asi kukura kwekuramba kwake kutendera iwo matambudziko kuti amunyorere uye kuti ave ani.
Amai vaDerrick ndivo muenzaniso weizvo simba remukadzi rinogona kuwana. Kunyangwe ari mumwe chete, akaramba achichengeta vana vake vanomwe kusvika paanogona napo.
Uye hongu, tinogona kutaura kuti akaita basa rakakura kusvika parizvino. Aishanda muShipyard, achitambura kuti achengete muviri wake pamwe chete.
Nezve Derrick Lewis Siblings:
Sezvatakambotaura, Champ yechidiki ine vamwe vanun'una vatanhatu. Ndiye wechipiri pakati pehama dzake nhanhatu.
Fungidzira iye zvakare ane basa rekupa kune yake yemumwe munin'ina hupenyu, kubatsira mai vake. Mune izvi zvese, isu tine ruzivo rwushoma nezve mazita avo, kupi, kana zvavanoita.
Zvizhinji Nezve Derrick Lewis Relatives:
American Mixed Martial Artist inofanirwa kunge iine dzimwe hama. Derrick Lewis ane vashoma vevamwe vemhuri yake parutivi nevabereki vake, sehama nasekuru, nasekuru nasekuru. Kunyangwe naizvozvo, isu tinonzwisisa zvishoma nezvavo.
Zvisinei, sekureva kwaDerris, mumwe wehama dzake anonzi Kendrick akamubatanidza kuti asangane nemukadzi wake, April Davis.
Kunyangwe paine chiitiko chakabatikana chemumhanyi ane mukurumbira, Derrick Lewis achiri kugadzira mikana yekuzorora.
Seizvo zvinowanzo daidzirwa nevateveri vake vane rudo, Chikara chinofarira tsiva, nhabvu, kuteerera mimhanzi uye kushanda kunze kwekurovedza muviri. Anoda kuona makwikwi ewrestling uye kutamba mitambo yemavhidhiyo.
Derrick Lewis panguva yake yekuzorora.
Moreso, anoedza kushandisa nguva yakanaka nemukadzi wake, April Davis, nevana vake vatatu. Kune rimwe divi, iye haasi munhu anoshamwaridzana uye anoda kugara mumba zvakanyanya.
Nekudaro, anosvika kune vateveri vake vari kusimukira kuburikidza nevezvenhau. Iine vanopfuura mamirioni 2.1 mafeni pane Instagram, Lewis anoramba ari pakati pezvakakosha pamitambo.
Derrick Lewis anosvika kune vateveri vake vari kusimukira kuburikidza nevezvenhau.
Derrick Lewis Mararamiro:
Mutambi weUFC murwi wechokwadi wemutambo. Derrick Lewis akahwina muhondo makumi maviri neshanu mune yake makumi matatu neshanu nyanzvi Mixed Martial Artist outings.
Kubva muna 2021, anosvika pa # 2 muUFC heavyweight masosi. Kurwisa mukurumbira wake, anoramba achizvininipisa.
Derrick Lewis anokwanisa kutenga chero epamusoro mota kubva kuFerraris nePorsches kuenda kuLamborghinis nedzimba dzinodhura nezvakakura zvaakaita. Dеrrісk rесеntlу rеѕіdеѕ аt Сурrеѕѕ, Техаѕ, U.Ѕ.
Chikara nemota yake yechikara.
Derrick Lewis - Mari uye Net Kukosha:
Sekureva kweMukurumbira Net Kukosha, mambure aDerrick anokosha anodarika $ 1.5 miriyoni. Kubva muna Chikunguru 2021, ane angangoita UFC basa mihoro inodarika $ 3,931,000, sekureva kweThe Sports Mazuva ese. Zvakakodzera kucherechedzwa ndezvekuti vazhinji vaDerrick Lewis wеаlth соmеѕ kubva kumutambo wake we сhаmріоnѕhір muMМА.
Mukurwa kwake naAleksei Oleinik muna 2020, Lewis akawana mari inosvika madhora zviuru mazana matatu nezvishanu. Chikwama chake chakakura kwazvo ($ 315,000) chakabva mukukakavadzana kwake naDaniel Cormier kuUFC 530,000.
Nekudaro, hazvizove zvakaipa kufungidzira kuti mambure ake akakosha achakwira nekukunda kwake kwazvino pamusoro paBlaydes uye nehanya kwese kuchauya neine runyerekupe zita repfuti.
Derrick Lewis - Kubvumidza:
Mukumuka kweUFC 230, imwe resitorendi yakaburitsa pachena kuti kana Derrick Lewis akabuda akunda, vanozowana zvekudya zvemahara kune wese munhu pakati pa2 - 4 masikati neSvondo.
'The Black Beast' yakasaina chibvumirano chekubvumirana naPopeyes, Louisiana Kitchen yadzokera kuUFC 230. Kubva ipapo, akatsigira mabrands akati wandei. UFC wrestler yakaratidza kuti aizowana chikafu chemahara panzvimbo iyoyo kwehupenyu hwake hwese.
Mufananidzo wekubvumidzwa kwaDerrick nePopeyes, Louisiana Kitchen.
Derrick Lewis Untold Chokwadi:
Chokwadi # 1: Kurwisa Maitiro:
Iye Aimbova welterweight mukombe shasha Dan Hardy akatsanangura Derrick sebhora rinopwanya.
Pamusoro pezvo, “Nguva dzese dzatakambotaura nezvaLewis kare, zvisinei nekuti ari kupokana naDaniel Cormier, kana kuti ari kurwa naVolkov, kana kuti ari kurwa naCiryl Gane, chinhu chimwe chete ichi chiripo nguva dzose.
Pese paanobata ruoko rwerudyi, mutambo unopera. ” Derrick anofarira Stand-up fight.
Vateveri nevatauri vakamucherekedza nekuda kwekugona kwake kunoshamisa kusimuka kuita senge mhosva yekurwira yevanomupikisa. Lewis anoita chiito chake ari pazasi uye nekumira-kumusoro chinzvimbo.
Chero paanomhara ruoko rwerudyi, mutambo wapera.
Nekudaro, vaongorori vakacherekedza kuti kana vakatarisana neMMA nyeredzi vane ruzivo mu'vanhu -style wrestling, 'saDaniel Cormier, Lewis anoona zvichinetsa kupukunyuka chinzvimbo chepasi.
Zvakangodaro, Lewis akaonekwa 'kusimuka' paakatyisidzirwa nechinzvimbo chemuchinjikwa naRoy Nelson, murwi ane mutsimba wetsiva. Vaongorori vakaedza kutsanangura chiitiko ichi.
Chokwadi # 2: Kubatira vanhu:
Dеrrісk, ndiani akataura nezve 'The Vlасk Веаѕt' yakaverengwa zana kubva mukukuvara. Munguva yemafashama akakonzerwa neHurricane Harvey muna 100, UFC's Derrick Lewis akapedza zuva iri, achiponesa vanhu muHouston.
Akadhonza vanhu vangangosvika zana kubva kumafashama emvura muHouston, Texas, kuburikidza nemotokari yake hombe yeChevrolet 100 × 4 munharaunda yake kuCypress. Kunyangwe imba yake yaive yakanaka, asi akashandisa nzira dzake kuve nechokwadi kuti vamwe vakanaka.
Derrick aine hofori yake Chevrolet 4 × 4 rori munharaunda yake kuCypress.
Chokwadi # 3: Hukuru Simba rake:
Nezuva regumi nesere raMay 18, Lewis aidzokera kumotokari yake mushure mekurovedza muviri paakaona murume anonzi aiedza kuvhura musuwo wemota yake. Lewis anonzi akarova mbavha yainzi iyi ndokumunamira pasi kusvikira mapurisa asvika.
Chokwadi # 4: Derrick Lewis Tattoo:
Kungofanana nevazhinji vemauto, Derrick ane mashoma anonakidza ehunyanzvi emuviri anoshongedza muviri wake wepamusoro. Iyo Champ, zvakadaro, inopa zano kana uchifanira kuwana imwe, zviite uchidhakwa.
Pakati pezvakawanda zvemuviri wake zvakanyorwa pane iri pachipfuva chake. Iyo ikorona hombe inked inoteverwa nemapara magurovhosi pasi payo.
Korona chiratidzo chekukunda, kuzvidzora, uye kukunda. Kune rimwe divi, Boxing Gloves ndiyo inomiririrwa neChamp yekuda kwake tsiva uye inoratidza kuti anogara achikurudzirwa kukunda vavengi vake uye kubuda nekukunda.
Pazasi pechikamu chinotsanangura muviri wake nyora.
Chokwadi # 5: Makwikwi uye zvinoitwa:
Kubva zvaakapinda muUniversal Fighting Championship, ane mbiri dzinozikanwa kuzita rake. akakunda Performance yehusiku (Kane nguva), Kurwa kwehusiku (Katatu), uye Vazhinji vanogogodza muUFC Heavyweight nhoroondo (12).
Chokwadi # 6: Derrick Lewis akawedzera zvibhakera - zvikanganiso Herb Dean:
UFC Champion akatsanangura kuti sei aikanda zvimwe zvibhakera kumunhu aisaziva, achiseka kuti Curtis Blaydes angadai akasimuka saiye 'Undertaker', murwi weWWE ane mukurumbira. “Anogona kutendeuka ave 'Undertaker' ogara akatwasuka ndokudya pfuti dzese.
Sevazhinji vateveri veMMA uye vaongorori vakadudzira chiito chaDerrick Lewis sechisina basa uye chisina basa, iyo Nha.
Nekudaro, pachinyorwa chakakomba, Derrick Lewis akapomera muridzi wepfumo Herb Dean nezvezvimwe zvibhakera zvaakadzika pana Curtis Blaydes, kunyangwe mushure mekunge muvengi wake atove.
asingazivi. Ona zvakakosha zvehondo pazasi.
Derrick Lewis Biography Pfupiso:
Derrick akakwikwidza makumi matatu nematatu nemakumi maviri neshanu kuhwina uye nomwe kurasikirwa. Makumi maviri ekukunda akaitwa nekugogodza, mana nekutumira, uye mumwe nesarudzo.
Nekudaro, kunyangwe iwe ukatadza kuenda kuburikidza nezvose zviri pamusoro, shandisa tafura iri pazasi kuti uwane ruzivo rwakajeka nezveAmerican Mixed Martial Artist uye Champion.
Derrick Lewis Bio Dhata
Zita rizere: Derrick James Lewis
Zita rekudanwa: Chikara Mutema
Zuva rekuzvarwa: 7th zuva ra
Nzvimbo yekuzvarirwa New Orleans, Louisiana, US
Basa: yakasanganiswa nehondo
Wife / Wawakaroora: Kubvumbi Davis (m. 2017)
Vana: 2 vanakomana, mumwe mwanasikana
Hobbies: tsiva, nhabvu,
uye kushanda kunze kweGym. Anoda kuona makwikwi ewrestling
uye kutamba mitambo yemavhidhiyo.
kukwirira: 6 ft 3 mu (1.91m)
Muhoro: $ 140,000 (approx. Chikwama pakurwa)
Net Worth: $ Miriyoni 4
Kunobva Pfuma: MMA Basa uye Endorsements.
Residence: Cypress, Texas, US
Mukuvhara Derrick Lewis's Biography uye Yehucheche Hupenyu Hupenyu Nyaya, Tinovimba wakadzidza zvishoma zvidzidzo. Kunyangwe akakurira mumusha mumwe chete, aive asingaregi zvine chekuita neramangwana rake rakajeka.
Akaona maitiro ekushandisa zvakanyanya kugona kwake kwepanyama. Derrick Lewis akaburitsa mamiriro ezvinhu akagadzira nzira yake kubva mutirongo nekushungurudzwa kuenda kuzita reUFC. Ona kuti akadzora sei kutsamwa kwake kwehudiki muhondo yake. Hasha mumakwikwi ake dzakamutorera kukunda kwake kusingachinjiki.
Tinotenda kuti iwe wawana izvi kunyora-up zvinonakidza uye zvinofadza. Nyorera zvimwe zvebhaibheri chokwadi neepamusoro-notch mhando.
Derrick Lewis anoburitsa mamiriro ezvinhu akagadzira nzira yake kubva mutirongo nekushungurudzwa kuenda kuzita reUFC.